Andian-tsambo ny Ellicott Dredges manadio ny lavenona, Fandinihana tranga momba ny tontolo iainana
Ny fanadiovana avy amin'ny TVA Coal Ash Disaster dia mandrava tany vaovao
Aogositra 1, 2011
Loharano: Engineering News-Record - ENR.com
Raha i John Kammeyer, PE, filoha lefitry ny Tennessee Valley Authority momba ny fandoroana arintany, dia nankany amin'ny toby famokarana herinaratra arintany Kingston TVA tamin'ny 3:30 maraina tamin'ny 23 Desambra 2008, ary "nahita ireo banga rehetra teny an-dàlana" - mba ho voafaritra tsara , 5.4 tapitrisa cu yd ny lavenona arina avy amin'ny farihy lavenon'ilay zavamaniry - Fantatr'i Kammeyer niaraka tamin'izay fa nisy tsy fahombiazan'ny injeniera.
"Tsy mbola nahita zavatra toy izany aho teo aloha," hoy izy momba ny lavenona arina mando izay nidina avy amin'ny fefy tsy nahomby ny alina talohan'izay, nameno ny Renirano Emory sy ireo dobo teo akaiky teo, nanarona ny arabe sy ny lalamby ary nanimba ny tany 300 hektara manodidina ny mamboly misy residu lavenona.
Roa taona sy tapany taty aoriana, mbola tsy tafaverina amin'ny laoniny tanteraka ilay faritra avy amin'ilay nantsoin'ny manam-pahaizana hoe loza voajanahary ratsy indrindra amin'ny tontolo iainana. Saingy nahavita nanadoka ny lavenona mitsikera rehetra ny mpiasa - tokony ho 3.5 tapitrisa cu yd - avy any Emory, izay nosokafana nanomboka teo akaikin'ny manodidina ny lavenona. Mifantoka amin'ny antsoiny hoe fanesorana lavenona "tsy manakiana" an-tanety izao ny TVA. Ny fanadiovana an-tsokosoko, tombanana ho $ 1 miliara ka hatramin'ny $ 1.2 miliara, dia antenaina ho vita amin'ny 2014.
"Afaka mahita ny farany isika," hoy i Bob Deacy, filoha lefitra zokiolona amin'ny TVA miadidy ny fanadiovana Kingston. Ny fitsapana ny kalitaon'ny rivotra sy ny rano dia tsy nanondro olana lehibe amin'ny metaly mavesatra na loto hafa, na dia mitohy aza ny fitsapana. Ny sidintsidina dia hita matetika eny amoron'ny renirano; Nilaza ireo mpiasa ao amin'ilay tranonkala fa tsy mbola nisy tsara kokoa noho izany.
Fa ny fanadiovana dia antsasaky ny tantara fotsiny.
Ny TVA dia mandany hatramin'ny $ 2 miliara hanamafisana sy hametrahana ny tahiry mando amin'ireo zavamaniry rehetra ao aminy ary hamadihana ny lavenirany ho maina, drafitra feno fikafika izay misy ny fananganana rindrina slurry mirefy 80-ft ny manodidina ny farihin'i Kingston mba hisorohana. tsy fahombiazan'ny ho avy. Talohan'ny taona 2008 dia tsy voakarakara tsara ireo dobo-lavenon'ny TVA, ary matetika dia tsy raharahan'ny mpitantana ny sainam-pirenena mena momba ny dobo, hoy ny tatitra tamin'ny TVA tamin'ny taona 2009.
Miankina amin'ny valin'ny didim-pitsarana miandry ny fiarovana ny tontolo iainana izay hametraka ny fanary lavenona eo ambany fanaraha-mason'ny federaly, ny ezaky ny TVA dia mety hanondro mialoha ireo lalàna vaovao mety mitaky fitaovana hafa amin'ny zavamaniry arintany. Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 100 ny zavamaniry amerikana manana 676 fanondrahana rano amin'ny tany sisa tavela ho an'ny sisa tavela amin'ny arina, hoy ny EPA.
Na izany aza, ny fanovana amin'ny fitaovana hafa dia mety tsy hatao alohan'ny hamoahana ny lalànan'ny EPA na handaniana ny lalàna momba ny lavenona ny kongresy.
"Raha jerena izay atahorana sy ny habetsaky ny vola dia tsy te ho voasazy ireo mpampita fitaovana amin'ny fanovana izay tsy eken'ny lalànan'ny EPA," hoy i Jim Roewer, talen'ny fahefana mpanatanteraka, Utility Solid Waste Activities Group, indostrian'ny herinaratra vondrona.
Fitaovam-piompiana serivisy momba ny tontolo iainana Sevenson an'ny Ellicott® marika lasitra ampiasaina amin'ny fanadiovana.